Home EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Nigeria Angelo Ogbonna Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Akụkọ ndụ anyị nke Angelo Ogbonna na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata, akụkọ mmalite, ezinaụlọ, ndị nne na nna, nwunye, ụmụaka, ụzọ ndụ, ndụ onwe onye na uru bara uru.
N'okwu ndị dị mfe, anyị na-ewetara gị njem ndụ onye na-agbachitere ya, site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị sie ike, nke a bụ nwata ọ ga - abụ okenye - nchịkọta zuru oke nke Angelo Ogbonna's Bio.
Mbido na mbilite nke Angelo Ogbonna.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọdịdị anụ ahụ ya pụtara ìhè nke na-enye ya ohere ịgụ egwuregwu ahụ. Ọ bụghị ihe ijuanya Roberto Mancini echetarala ya n'òtù ndị Italytali iji kwadebe maka asọmpi Euro 2021.
N'agbanyeghị otuto niile ndị a, naanị mmadụ ole na ole maara akụkọ ndụ Angelo Ogbonna, nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Enweghị oge ọzọ, hapụ ka ịmalite.
Angelo Ogbonna Childhood Akụkọ:
N'ihi na ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha "Bonne". Obinze Angelo Ogbonna Amuru na abali iri abuo na ato nke onwa May 23 ka nna nna ya na nne ya (onye Nọọsụ), n'obodo Cassino, Italy. Ndị na-agba ọsọ bụ nke abụọ n'ime ụmụ atọ (Paola, Angelo na Emily) nke amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya.
Dị ka otu nwa nwoke nke ezinụlọ ya, Angelo nwere ihe ùgwù ụfọdụ pụrụ iche - nke a na-emekarị maka ọtụtụ ndị nne na nna nke Nigeria. Otu n'ime nne na nna Ogbonna dị obere n'agbanyeghị na ọ gbara afọ iri ise, anyị nwere akaebe na nke a.
Zute otu nne na nna Angelo Ogbonna - nne ya.
Maka ebumnuche kachasị mara onye ọkpụkpọ Italy, ọ na-ewepụ nna ya na akụkọ banyere ahụmịhe nwata. Dịka nwatakịrị, onye nwere nkà zuru ezu hụrụ nne ya na ụmụnne ya ndị nwanyị n'anya, Paola na Emily hụrụ ya n'anya. Ha gbakọtara ọnụ na-emekọ ihe ọnụ.
Angelo Ogbonna dị ka nwatakịrị sere onyinyo ya na nne ya na ụmụnne ya nwanyị - Paola na Emily.
Ezigbo ezinụlọ Angelo Ogbonna:
Inwe ike ịkwado njem ha site na Nigeria gaa Italytali na-egosi na mama ya na papa ya nwere ego. Ihe si na nyocha pụta na-egosi na onye na-agbachitere ahụ sitere na nzụlite ezinụlọ nke etiti - onye na-ebi ma na-enwe nkasi obi dịka ụmụ amaala Italiantali nke agbụrụ ndị Naijiria.
N'ụzọ dị mwute, akpụkpọ ojii ya ahapụbeghị ya site na mpekere nke ndị na-akpa oke agbụrụ na-enwe obi ụtọ ịmejọ mgbọrọgwụ nna nna ya. Dika ndi ezinulo nke ndi Naijiria amuru na mba ozo - ihe dika Bright Osayi-Samuel, Eberechi Eze wdg, Angelo si Owerri na Imo steeti, Nigeria.
Maapụ a kọwara ezinụlọ ezinụlọ Angelo Ogbonna. Ndị mụrụ ya si Owerri na Naija.
Obodo ezinụlọ Angelo Ogbonna nke Owerri dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Nigeria. Ọtụtụ mmadụ na-ezo aka obodo ukwu dị ka isi obodo ntụrụndụ nke Nigeria n'ihi nnukwu ụlọ ịgba chaa chaa n'okporo ámá na ebe ntụrụndụ dị mma. N'agbanyeghị na a mụrụ Ogbonna n'Italytali, ọ mụta ịsụ asụsụ Igbo - olu ndị mụrụ ya.
Angelo Ogbonna Football Akụkọ:
Ndị na-agbachitere Hammers malitere njem njem bọl mgbe nne na nna ya gbara ya ume ka ya na ụmụaka ndị ọzọ na-akpakọrịta na mpaghara Italian Cassino. E wezụga atụmanya, mgbalị mbụ ya igwu egwuregwu ahụ wee bụrụ ihe na-adọrọ mmasị, n'agbanyeghị ịbụ nwata ihere.
Mgbe o gosipụtara nkwa ụfọdụ, nne Ogbonna gwara ya ka ọ deba aha na nwata Nuova Cassino nke edobere ebe ọ tọrọ ntọala dị mma maka ọdịnihu ya. N'ụzọ na-akpali mmasị, nwata ahụ n'oge na-adịghị anya matara ihe ịmekọ ihe ọnụ ka ọ malitere ịzụ ndị enyi ọhụrụ.
Hụ na nwa ha nwoke amatara karịa ndị ọgbọ ya, ezinụlọ ya nwetara akara na football bụ ọkpụkpọ ya. N'ụzọ dị mwute, ka oge na-aga - egwuregwu game nke Angelo hụrụ nke kachasị njọ. Oge mbụ ọ na-egwu bọl hụrụ ọtụtụ adịghị mma na ntanetị.
Iji mezie ihe o yiri ka ọ bụ ihe mgbochi nye ọrụ ntorobịa ya, nne Angelo chọrọ maka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ a kwadebere nke ọma. Ọ bụ n'oge olileanya dị otú a - na 2002 - ka Torino bịara ma ọ gafere ọnwụnwa ha. Ọganihu ngwa ngwa ruo afọ 14, Ogbonna bịanyere aka na ụlọ ọrụ ndị Italy.
Angelo Ogbonna Bio - Roadzọ a ma ama Akụkọ:
Na-egwu maka Bulls, nwatakịrị ahụ mezuru nkà ya na ikike ya na ikuku. Gwọ ọrụ maka ịrụsi ọrụ ike ya bịara n'otu oge mgbe akụkọ banyere obere talent ya malitere ịgbasa na Italytali. N'oge ahụ, ọtụtụ klọb bịara na-arịọ maka mbinye aka Angelo.
Mgbe o mechara nke ọma na mbinye ego ya kwagara Crotone na oge 2007-08, Juve kpatara iwegharị oge ezumike na-ewe ya iwe. Dị ka akara aka ga-esi nweta ya, nne Ogbonna - gburugburu July 2013 - kwadoro echiche ha banyere nwa ya nwoke ịbanye na Old Lady.
Angelo Ogbonna Biography - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Na Juve, etiti etiti si na ike gaa n'ike site na mmekọrịta siri ike na Leonardo Bonucci na Giorgio Chiellini. Agbanyeghị na ịnọ n'azụ ịtụ egwu hụrụ nnukwu nwoke ahụ ka ya na Enyi nwanyị nke ingtali na-agụ ụbọchị ya. Site na nkwado zuru oke site na ezinụlọ, ọ bịanyere aka na deal 9.97 nde na West Ham United na 2015.
Njikọ Njikọ nke England wee bụrụ ebe dị mma maka ụdị egwuregwu ya. Beingbụ otu n'ime ike nke David Moyes ngwa agha, Ogbonna ghọrọ Hammer nke atọ na FIFA Team of the Week - maka Nọvemba 2020.
Anyị akwadebewo vidiyo nke ga - enyere gị aka ịghọta ihe kpatara ndị Fans ji akpọ ya - The Wall. Ndị ọzọ, dị ka anyị kwuru, bụ akụkọ ihe mere eme.
Mmekọrịta mmekọrịta nke Angelo Ogbonna:
Ije ije na akụkụ nke ọdịiche dị iche na nke ụfọdụ ndị Algeria - Benrahma kwuru, Obinze (dika ụmụnne ya ndị nwanyị na-akpọ) dị ka n'afọ 2020 nọ n'ọrụ na enyi ya nwanyị tụgharịrị nwa mama na nwunye.
N'oge itinye Bio a, Laura bụ nwunye Angelo Ogbonna ka ọ bụrụ. Ọ nọgidere na-eguzosi ike n'ihe nye ya n'oge ihe siri ike na n'oge nsogbu. Dị ka ndị Fans kwuru, ụzọ pụrụ iche di na nwunye a - ịcha uwe ndị Japan - abụghị nke abụọ.
Agbanyeghị na ndị hụrụ ya n'anya - alụbeghị di ma ọ bụ nwunye - na-enwetara nkwado zuru oke nke ezinụlọ ha. Ka m na-ede, ndị ịgba egwu bọọlụ na enyi ya nwanyị nwere nwa nwoke aha ya bụ Samuel Ogbonna.
N'ime oge mkpọchi 2020 COVID-19, ndị hụrụ ha n'anya na-atụ anya ọmụmụ nke nwa ha nke abụọ. Iji hụ na nchekwa nke nne ya (nọọsụ), ụmụnne nwanyị na ndị ọ hụrụ n'anya, Ogbonna mere mkpa. Ọ na-abụ olu mgbe ọ na-eme mkpesa banyere otú Britain si leda anya na mmetụta nke COVID. Na-enweghị ajụjụ, onye borntali a mụrụ na Italy bụ ezigbo nwoke.
Angelo Ogbonna Ndụ Nke Onwe:
Ee, ọ na - egosi na ọ na - agbasi ike ma na - eme ihe ike na pitch. Otú ọ dị, e nwere ihe karịrị àgwà ya karịa ihe anya na-ahụ. Nke mbu, onye Ogbonna bu ngwakọta nke agwa Gemini Zodiac.
N'ihe ederede ọzọ, naanị isoro Angelo nọrọ otu oge ga-eme ka ị ghọta ụdị ịhụnanya na obiọma ya. Dị ka Pablo Fornals, ụlọ ọrụ West Ham na-ewekarị onwe ya n'ebe ndị dị jụụ. Dị ka ebe a, anyị na-ahụ ya ka ọ na-ezu ike na ọmarịcha mma n'èzí ụlọ ya na London.
Angelo Ogbonna Web site Life:
Afọ 2020 ahụla Obinze ịkpata ntakịrị karịa Tomas Soucek ma pekarịrị Jarrod Bowen. Ọ na-eme ụgwọ ọnwa kwa afọ nke ihe ruru nde £ 3.64. Ọ bụ ezie na ọ bụ ọtụtụ ego, Ogbonna anaghị ahụ onwe ya ka ọ na-ebi ụdị ndụ ọpụrụiche. Ndị a gụnyere ndị nke ụgbọ ala na-enwu enwu, nnukwu ụlọ, ụmụ agbọghọ, booze, wdg.
… Ego o nwetara emeela ka Net Net ya ruru ego ruru £ 15 Million (2020 Stats). N'agbanyeghị ọtụtụ ego bọọlụ na akpa ya, ndị Fans ajuju gbasara ejiji Ogbonna ya. Hụ onwe gị.
Ndụ Angelo Ogbonna Ezinụlọ:
N'ikwu okwu na mgbasa ozi West Ham, o mere ka ụwa ghọta ihe kachasị mkpa maka ịdị adị ya. Ogbonna kwuru; Ezinụlọ na Football bụ naanị ihe abụọ na-ewetara ya ahụ efe. Ugbu a, anyị ga-ewetara gị eziokwu gbasara onye otu ezinụlọ ya bido n'ụmụnne ya nwanyị mara mma - Paola na Emily.
Banyere ụmụnne nwanne Angelo Ogbonna:
Sistersmụnna nwanyị ndị egwuregwu bọọlụ, Paola na Emily, rụrụ nnukwu ọrụ na ịkọwa ahụmahụ nwata. Ka ọ dị ugbu a, ụmụnne nwanne Angelo Ogbonna bi n'Italytali mana ha na-akwụkarị nwanne ha nwoke ụgwọ n'ụlọ ya na Stratford, East London.
Banyere nne Angelo Ogbonna:
Anyị niile maara na ọ theụ nke nne na nna ọ bụla bụ ịhụ ka nwa ha bi ndụ obi ụtọ na ahụike. Nke a bụ ihe gbasara nne Ogbonna, onye ejiji ya na-ekwu ọtụtụ ihe banyere ọrụ ya - nọọsụ.
Nnyocha na-egosi na nne nwere ụmụ aka atọ zụrụ Angelo, Paola na Emily. Nke a mere n'enweghị nna ha. Dị ka nọọsụ, ọ hụrụ na Angelo anaghị akwụsị ilekwasị anya n'inweta ịdị ukwuu site na bọl.
Banyere Nna Angelo Ogbonna:
N'agbanyeghị na ọ na-ebili na-atụ egwu, onye etiti ahụ ekwughị ihe ọ bụla gbasara papa ya. N'etiti ndị mụrụ ya, Ogbonna ji obi ụtọ na-ekwu na ọ bụ nne ya rụzuru ọrụ ya. Ma eleghị anya, nna ya na mberede ịhapụ onye ọ bụla na ezinụlọ ya. Ọzọkwa, ikekwe kachasị njọ - ọ ga-anwụrịrị ndụ ya n'aka ọnwụ.
Banyere nwanne nwanne Angelo Ogbonna:
Otu n'ime ndị ikwu a ma ama nke etiti ahụ bụ nwanne nwanne ya, Prince Eleazar Onyewuchi Ogbonna. Ha abụọ kekọrịta aha nnabata yiri nke a, ihe na-ekpughe mmekọrịta nna.
Prince Eleazar Onyewuchi Ogbonna bụ nwaafọ bọọlụ teknụzụ agba kara aka nwere egwuregwu bọọlụ. E wezụga ya, ọ nweghị ihe ọmụma gbasara ndị ezinụlọ Ogbonna fọdụrụnụ. Ọzọkwa, ndị nne na nna ya ochie, ndị nne na nna ya na ndị ikwu ya.
Angelo Ogbonna Eziokwu Eziokwu:
Iji mechie Life Life of Obinze, nke a bụ eziokwu ole na ole ga - enyere gị aka ịghọta ihe ncheta ya.
Eziokwu nke 1: Ọnwụ-Ọnwụ Ahụmahụ:
Angelo Ogbonna enwetawo oge nke ka na-enye ya akpụ na akpịrị. Na 2008, mgbe ọ ka na-egosi Torino, "Mgbidi bọọlụ" dị mwute na ọ rahụ ụra n'ụgbọala ahụ mgbe egwuregwu abalị na-agwụ ike.
Site na oge o tetere ụra, ụgbọ ala ya gafere n'akụkụ nke ọzọ nke okporo ụzọ - banye n'ime osimiri na Turin. Obi dị m ụtọ na Ogbonna lanarịrị ihe mberede ahụ merenụ.
“Enwere m obi ụtọ ịnọ ebe a na-agwa gị okwu. N'abalị ahụ, ana m akwọ ụgbọelu, m wee hie ụra. "
“MGBE M TETERE, MGBE MGBE MGBE MGBE MYGBỌ MGBE .BỌR. AH.. Ọ D SO M ezigbo ọsọ. M kụrụ akwụkwọ ahụ wee gbadaa na mmiri. "
Eziokwu nke 2: Rygwọ ọnwa na ụgwọ ọnwa nke abụọ:
kwa Afọ £ 3,640,000
kwa ọnwa £ 303,333
Kwa Izu £ 69,892
Kwa .bọchị £ 9,985
Kwa elekere £ 416
Kwa Nkeji £ 6.9
Kwa nke abụọ £ 0.12
Site na ndakpọ, onye amaala onye Italiantali ga-arụ ọrụ opekata mpe afọ atọ na ọkara iji rite ihe Ogbonna na-enweta n’ime otu ọnwa. Onu ogugu ndi Naijiria, n’aka nke ozo, kwesiri iru oru rue otu nari na iri ise tupu ha enwetakwu ihe ndi n’azu n’otu onwa.
Anyị emeela atụmatụ nke ọma nyocha ihe ọ na - eme dị ka elekere na - akụ. Chọpụta n'onwe gị ego ole ọ kpatara kemgbe ị bịara ebe a.
Kemgbe ị bidoro ilele Angelo Ogbonna'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Eziokwu nke 3: Onyinye ya na-enweghị atụ nye nne mama Declan Rice:
Iche ihu Marcelo Bielsa si mgbochi ọgụ megide oge 2020-21 EPL siri ike maka ọtụtụ ndị otu. Agbanyeghị, Ogbonna nyere ndị Hammers mmeri Leeds na mgbe o meriri ihe mgbaru ọsọ mmeri na nkụnye eji isi mee n'okpuru ndị isi Chora Ohia.
Ihe a niile mere n'ụbọchị ọmụmụ nke nne Declan, onye tụgharịrị afọ 54 dịka na 2020. N'ihi ya, Declan toro Ogbonna dị ka onye ọkpụkpọ pụtara ìhè mgbe ọ na-achọ ka nne ya nwee obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ!.
Eziokwu nke 4: Religion:
Aha (Angelo) enyelarị usoro okpukpe ya. O nwere ike ọ gaghị abụ nwata ụka, agbanyeghị, ọ na-edo ụbọchị izu ike nsọ ma na-agbaso iwu nke okwukwe Ndị Kraịst ya.
Eziokwu nke 5: Ogbenye FIFA Rating:
N'otu oge, Ogbonna hụrụ ọkwa dị mma. Nke a dara ugbu a n'ihi na ọ gafee elu ya. N'ihi ọrụ ya na nso nso a nke 2020, anyị nwere ike ịsị na FIFA na-asọpụrụ ya - dịka ha na-eme Arthur Masuaku.
N'ime usoro ọgụgụ, anyị ghọtara na Biography nke Angelo Ogbonna bụ Biography akụzierela ihe ndị a; Maka ndị na-agba ọsọ ụkwụ, ndidi abụghị ikike ichere, mana omume ịdebe mmụọ dị mma mgbe ị na-eche. Gbada usoro nkwụsị na Juventus dị ilu, mana ndụ na West Ham ka dị ụtọ maka Ogbonna.
Ọzọkwa, anyị na-aja nne na nna ya (ọkachasị nne ya) maka inyefe nlekọta ya n'aka ya n'oge ọrụ ya niile. Ya na ezinụlọ ya dum maka iguzo ya na oge ọgba aghara - dị ka ihe mberede 2008 ya. Ọ dị anyị mkpa ịkpọ ụmụnne ya ndị nwanyị (Paola na Emily), bụ ndị na-eme ka nwata ya dị ndụ.
Daalụ maka ịnọnyere anyị n'ọchịchọ anyị na-aga n'ihu ịnapụta Akụkọ Afrika Football. Jiri obiọma kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọta ihe ọ bụla na-adịghị ka ọ dị mma na edemede anyị.
Ma ọ bụghị, kọọrọ anyị okwu banyere ihe ị chere gbasara ndị Italiantali na-asụ asụsụ Nigeria. N’ikpeazụ, Wiki-table anyị nwere nchịkọta nke Angelo Ogbonna's Bio.
Aha n'uju: Obinze Angelo Ogbonna
aha otutu: Ọ dị mma
Ebe amụrụ onye: Cassino, Italytali
Enyi / Nwunye: Laura
Children: Samuel (nwa)
Ezigbo Net: 40.2 Nde (2020 Ọnọdụ)
Rygwọ ọnwa kwa afọ: Million 3.64 million (2020 Ọnọdụ)
Ezinụlọ Ezinụlọ: Nigeria
elu: 1.91 m (6 ft 3 na)
Ifiedbọchị agbanwee: November 29, 2020